Dowladaha Faransiiska iyo Talyaaniga inuu xiriirkooda xumaado maxaa sabab u ah? – Walaal24 Newss
January 22, 2019	0	By walaal24
Faransiiska ayaa u yeeray safiirka Talyaaniga u fadhiya caasimadooda Paris kaddib markii ku xigeenka ra’iisal wasaaraha Talyaaniga uu ku eedeeyay Faransiiska inuu Afrika gumeysto uuna sabab u yahay qulqulka muhaajiriinta.
Maalintii Axada, ra’iisal wasaare ku xigeenka Talyaaniga Luigi di Maio, ayaa ugu baaqay Midowga Yurub inay cunaqabteyno kusoo rogaan Faransiiska sababo la xiriira siyaasadooda Afrika.
Waxa uu sheegay in Faransiiska “uusan abid joojin gumeysiga tobanaan dowladood oo Afrikan ah “.
Tan iyo markii labada xisbie ee Five Star iyo League ay la wareegeen talada Talyaaniga bishii June 2018 xiriirka labada waddan ayaa sii xumaanayay, xiisadda ka dhex aloosan labada dal ayaa salka ku heysa qulqulka muhaajiriinta ee gaaraya Talyaaniga, labada dal ayaa isku heysta arrinka ah in Faransiiska uu dib ugu celiyay muhaajiriin badan xadka waqooyi ee Talyaaniga.
Markii Faransiiska uu ku dhaliiceeyay Talyaaniga in uusan ogoleyn in doomaha sida muhaajiriinta laga soo samatabixiyo badda Mediterranean-ka, ayaa Talyaaniga ku jawabay inuu Faransiiska ku eedeeyo inuu diidan yahay inuu qaabilo muhaajiriinta.
Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini, ayaa ku eedeeyay Faransiiska toddobaadkii lasoo inuu gabaad siiyay 14 “argagixiso ah” oo Talyaanigu doonayay, waxa uuna dalbaday in dib loogu soo celiyo eedeysanayaashaasi Talyaaniga si loo dhigo xabsi.
Waxuu ku eedeeyay hadaladiisii ugu dambeeyay Faransiiska xili uu booqasho ku marayay gudahaTalyaaniga dabayaaqadii toddobaadkan, haddaladiisa ayaana kusoo beegmaya xilli Qaramadda Midoobay ay sheegtay in ku dhawaad 170 muhaajiriin ah laga baqdin qabo inay ku qaraqmeen labo doon oo ku burburay badda Mediterranean.
“Midowga Yurub waa inuu kusoo roggaa cunaqabateyno Faransiiska iyo dhamaaan dalalka la midka ah ee burburinaya Afrika kuna qasabaya dadka Afrikanka ah inay isaga soo cararaan dalalkooda, dadka Afrikanka ah waa inay joogaan dalalkooda, ma ahan inay isku soo haligaan badda Mediterranean-ka,” ayuu yiri ra’iisal wasaare ku xigeenka Talyaaniga.
“Dadku waxay maanta uga soo cararayaan dalalkooda waa sababo la xiriira in dalalka Yurub gaar ahaan Faransiiska uusan abid joojin inuu gumeysto tobanaan dal oo Afrkan.”
Madaxweyn Farmaajo oo warqada aqoonsiga ka guddoomey Danjiraha cusub Indonesia
Shirweynaha Qaran ee Isdhex-galka Ganacsiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Finland oo ka furmay Muqdisho
Gudomiyaha Gobolka Banaadir Eng. Yariisow oo Dhagax-dhigay Waddo Laami ah
Ra’iisal Wasaare Khayre oo shir guddoomiyay kulan looga hadalayay tubaha Dhaqaalaha iyo Amniga
Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay Gantaalo oo digniin ugu diratay Kuuriyada Koonfureed
Koox dabley ah oo weerar ku qaaday saldhig Booliska Sacuudiga ay ku leeyihiin degmada Zulfi
Daawo: Madaxweyne Farmaajo “Siyaasiinta Careysan hada waxay leeyihiin Dowladii dhaqaalihii wey ku fashilantay”
Daawo: Afhayeenka Madaxweynaha oo faah faahin ka bixiyay Safarka Madaxweynuhu ku marayo Gobolada Somaliland
Daawo: Xildhibaan Cali Xoosh” Waxaan soo Jeedinaya in Umadda Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Maaliyadd raali galin laga siiyo…..